के चीन अमेरिका को असफलता बाट खुशी छ ? – BANKE POST
अचेल अमेरिकी नागरिक बीच यो चर्को रूपमा चर्चा गरिएको विषय भएको छ। केहीले यो तर्क पनि गरिरहेका छन् “अमेरिकी प्रशासनले अमेरिकी सरकार र देशलाई दिनदिनै अपांग पारेको देखेर चीन हाँस्दैछ।”
चीन र अमेरिका बीच प्रतिस्पर्धा उत्तेजित भएकोले यस्तो प्रश्न उठेको हो ।
जब चीन पहिलो पटक कोरोना भाइरस महामारीको विरुद्ध लडिरहेको थियो र भाईरसको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो, त्यस बेला ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई सहयोग गर्न कुनै इच्छुकता देखाएन। यसको सट्टा, वाशिंगटनले यसलाई चीनको बेइजत गर्ने अवसरको रूपमा लियो।
अमेरिकामा अहिले कोविड १९ संक्रमण को संख्या ४० लाख नाघेको छ। यस माहामारी को बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पीओ को ध्यान चीन विरुद्ध छ र अझै पनि चीन विरुद्ध एक युद्धको माध्यमबाट अमेरिकालाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयासमा व्यस्त छन् । बेइजिङ र वाशिंगटनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि अहिले सबैभन्दा खराब बिन्दुमा दुई देश आइपुगेको छ।
चिनियाँ जनताको नजरमा चीनको उदयको अर्थ उनीहरूको मातृभूमिको आधुनिकीकरण र राम्रो जीवनस्तर हो। यद्यपि धेरै अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले चीन को उदय भनेको अमेरिकाको गम्भीर चुनौती हो भनेर गलत अर्थमा बुझ्छन्। ।
शिनजियांग, तिब्बत र हङकङमा अमेरिकाले चीनीयाँ शासनको कडा विरोध जनाएको छ। सबैभन्दा खराब कुरा, चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न वाशिंगटनले नयाँ नयाँ कानूनहरू पारित गर्दै नीति निर्माण गरेको छ।वर्तमान समयमा अमेरिकाले हङकङमा आन्दोलनकारी लाई समर्थन गर्दै कडा प्रदर्शन गर्न उक्साइरहेको छ र साथै ताइवानलाई हतियार बेच्न र सैन्य उपस्थिति बढाउन लागिरहेको छ।
यसबाहेक, वाशिंगटनले बेइजिङसँगको क्षेत्रीय विवाद बढाउन दक्षिण चीन सागरमा रहेका देशहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। यसले बढ्दो फ्रिक्वेन्सीको साथ क्षेत्रमा युद्धपोत र लडाकु जेटहरू पनि पठाउँदै दुर्घटनाको र द्वन्द्वको सम्भावना सिर्जना गरिरहेको छ।
अहिलेको समयमा अमेरिकी जनता एक आपसमा प्रश्न गर्छन्- “चीन अमेरिकाको असफलताबाट खुशी छ?” यो प्रश्न किन उनीहरूले गरे? यसको उत्तर हो, किनभने उनीहरू घरेलु मामिलामा असन्तुष्ट महसुस गरिरहेका छन् र अमेरिकाले युद्ध भड्काउन चीनमाथिको दमनको विरुद्धमा हो।
युद्ध र द्वन्द्व ले दुवै पक्षलाई हानी गर्दछ। तर अमेरिकाले चीनलाई असाध्यै दमन गरिरहेको छ, त्यसकारण चीन पछि हट्ने सम्भावना देखिँदैन, उसले बाह्य हस्तक्षेप को सामना गर्नेछ ।चीनले कहिले पनि अमेरिकालाई चुनौती दिन वा प्रतिस्थापन गर्न चाहँदैन, वा अमेरिकासँग पूर्ण टकराव दिदैन ।
तर चीन एक्लो छैन किनकि अमेरिकाले के गरिरहेको छ भनेर सारा विश्व जानकार छ। यस मामिला लाई कसरी समाधान गर्ने र सत्य तथ्य को पत्ता लगाउन सारा विश्वको ध्यानाकर्षण भएको छ। यद्यपि विधंवश मचचाउने र द्वन्द्व भड्काउने को पर्दाफाश अवश्य हुनेछ, र इतिहास मा उल्लिखित हुनेछ। विश्वमा शान्ति छाओस र शान्तिपूर्ण वातावरणको सिर्जना होस, हामी शान्ति चाहन्छौ। लेेेखक- शिब्रराज कार्की